Halleellaa Benishaangul Gumuz aanaa Gubbaatti raawwateen namootni 13 ol ajjeefaman – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHalleellaa Benishaangul Gumuz aanaa Gubbaatti raawwateen namootni 13 ol ajjeefaman
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Gubbaatti hallee qaamni hidhate gaggeesseen namootni 14 yoo ajjeefaman baay’een ammoo madaa’aniiru.
(bbcafaanoromoo)–Wiixata galgala naannoo sa’a lamaa hidhattootni ganda Abbuujaar jedhamutti halleellaa namoota irratti raawwataniin lubbuun namoota 14 yoo darbu namoota baay’een ammoo madaa’uu Daarikterri ol-aanaan Komunikeeshinii Naannoo Amaaraa Obbo Gizaachew Mulunee BBCtti himan.
Namoota du’aniin dabalata namootni biroo jahas madaa’uu himaniiru.
‘’ Garee hidhate shiftaatu haleellaa kana raawwate. Karaa qindaa’edha kan ajjeefaman,’’ jechuun haleellichi kan ‘’itti yaadameefi walitti bu’insa sabaa kaasuuf raawwatedha’’ jedhan.
Namoota haleellaa raawwatan keessaa gar tokko raayyaa ittisa biyyaa waliin walitti dhukaasuu himanii osoo hin qabamiin bosona galuu isaanii dubbatan.
Naannoon isaa bosonaan kan haguugame waan taheef namoota haleellicha raawatan qabuuf mijataa miti jedhanii amma to’achuuf yaalaa jiraachuu himan.
Amma humni raayyaa ittisa biyyaa naannichatti bobba’uu himuun naannoon Benishaangul Gumuz deeggarsa barbaachisu gochaa akka jiru himan Obbo Gizaachoon.
Dabalataan Iti Aanaan Itti Gaafatamaa Biiroon Bulchiinsaafi Nageenyaa Naannoo Benishaangul Gumuz Obbo Abdulaziz Mahaammad ‘’ qaamonni ergama badinsaa biyya keessaa fi alaa fudhachuun socho’an haleellaa raawwataniin lubbuun namoota 13 darbera’’ jechuun himuu isaanii Biiroon Dhimmoota Komunikeeshinii Naannichaa gabaasera.
Qaamni haleellicha raawwate leenjii gahaa kan qabuu fi meeshaa waraanaan deeggaramuun keessumaa guutunsa bishaanii hidha guddichaa gufachiisuufi saboota walitti buusuuf socha’aa tures jedhan.
Humni nageenyaa naannoo Benishaangul raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa waliin tahuun naannichatti tasgabbii uumuuf hojjechaa turuus himaniiru Obbo Abdulaziz.
Humni nageenyaa bobba’e qaamota haleellicha raawwatan shan ajjeesuun kilaashinkovii 12 fi matiriyesii tokko to’achuu himaniiru.
Shakkamtootni 20 tahanis kanumaan wal qabatee to’annoo jala ooluu ibsaniiru. Jiraataan maqaan isaa akka hin dhahamne barbaadu tokko ammo ‘’namoota gara 100 tahan ganda lama irraa walitti bahntu haleellicha raawwate.’’
Reeffi namoota ajjeefamaniis gara maatiitti ergamuun kanneen madaa’an ammo hospitaala Paawweetti yaalamaa jiraachuu himameera.
Qondaalonni mootummaa ol aanoon naannichatti argamuun uummata tasgabbeessaa akka jiranis Biiroon Dhimmoota Komunikeeshinii naannichaa ibseera
Nannoo haleellaan kun itti raawwatetti irra dedeebiin kanaan duras waan akkasii raawataa kan ture yoo tahu gama naannoo Amaaraa fi Benishaangul Gumuziin jiraattotni we’ee isaanii irraa buqa’ani ture.
Namoota kanaan dura buqqa’anii turan naannoleen lamaan waliin tahuun deebisanii akka qubatan taasisuun nagaan bu’ee akka tures himaniiru.